अल्पमतको सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन गर्दै, स्वार्थ समूहको लविङ तिब्र
२०७३ असार ३० गते ११:२०
काठमाडौं, ३० असार । अल्पमतमा परेको सरकारले हतार हतारमा दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाड तथा मूल्य सम्वन्धी) नीति २०६९ संसोधनको तयारी गरिएको छ । मोवाईल सेवा प्रदायक निजी कम्पनीलाई बढी लाभ मिल्ने गरी र...
मोबाइलमा पोर्नोग्राफी हेर्ने गर्नुभएको छ, होसियार ! तपाइको स्क्रिन लक हुनसक्छ
२०७३ असार २९ गते १६:५७
काठमाडौं २९ असार। तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा पोर्नोग्राफी हेर्नुहुन्छ? बताउन चाहने वा नचाहने तपाईँको कुरा हो। अडल्ट इन्टरटेनमेन्टमा पोर्नो मुभी सबैभन्दा बढी हेरिनेमा पर्छ। आफ्नो मोबाइलमा निशुल्क उपलब्ध हुने पोर्नो एप्स राख्नु भएको छ भने...
टेलिकमले चीनवाट अप्टिकल फाइबर ल्यायो
२०७३ असार २९ गते १६:४०
काठमाडौं, २९ असार । नेपालको दुरसञ्चार सेवालाई भारतीय परनिर्भरतावाट मुक्त गर्न नेपाल र चीनविच अप्टिकल फाइबर जडान सम्पन्न भएसंगै व्यापारीक कारोवारका लागि पनि काम अगाडि बढिरहेको छ। टेलिकमले व्यापारिक प्रयोजनका लागि साउनदेखि ल्याउने तयारी...
« अघिल्ला 1 … 49 50 51 52 53 … 56 पछिल्ला »